Wasaaradda Beeraha Oo Tababar Ku Sabsan La Dagaalanka Cayayaanka Khudaarta Ku Dhasha U Qabatay Dad Beeralay Ah | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasaaradda Beeraha Oo Tababar Ku Sabsan La Dagaalanka Cayayaanka Khudaarta Ku Dhasha U Qabatay Dad Beeralay Ah
Published on March 28, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka jawaabtay dalab hore ugaga yimid beeralayda dalka oo ahaa in wax lagala qabto cayayaanka aafeeyey wax soo saarkii khudaarta.
Waxaanay bilawday sidii loola dagaalami lahaa cayayaanka ay khubaro ku takhusustay beeralayda dalka qaarkood ku tababari doonaan sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karro cayayaanka ku dhasha khudaarta.
Iyadoo baaqii beeralayda laga jawaabayo ayaa maanta agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha waxa uu tababar ku saabsan la dagaalanka cayayaanka ku dhasha ee cunna noocyadda kala duwan ee khudaarta u furay xubno ka socday beeralayda dalka.
Tababarkaasi ayaa beeralayda lagu tababarayey sidii ay ula dagaalami lahaayeen ayaa si gaara u khuseeyey cayayaanka loo yaqaano Tuta Absulata (oo beeralayda u taqaano Magafe).
Codsigaasi oo ahaa waxyaabaha u badan ee ay beeralaydu ka cabanaysay Safarkii masuuliyiinta wasaaradda beeruhu ku tageen badi deeegaanada Beeralayda ah ee dalka.
Kaasoo ah sidii loola dagaalami lahaa khubaro ku takhusustay oo beeralayda ku tababari doonta la dagaalankiisa u dalbadeen.
Maxamed Cilmi Aadan, ayaa waxa uu xubnaha beeralayda ka socday kula dar daarmay inay iyaguna beeralaydii kale ee deegaanada ay ka yimaadeen gaadhsiiyaan, marka ay cilmi la dagaalanka cayayaanka khudaarta ku dhasha qaataan.
Waxaanu yidhi “Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka soo jawaabno dalabkii beeralayda ee ahaa in wax lagala qabto cayayaanka ku dhasha khudaarta gaar ahaan cayayaanka aad u taqaanaan magafa, waxaanan rajaynayaa cilmiga aad halkan ka qaadataan inaad ku dabaqi doontaan wax ka qabashada beerihiina, isla markaana gaadhsiin doontaan beeralayda kale.
Tababarkan oo ka dhacay Hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda beeralayda dalka, iyada oo ay wasaaradda ka taageertay hay’adda GIZ.
Tababarkan la dagaalanka cayayaanka ayaa waxa uu ka dambeeyey ka dib markii masuuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda Axmed Muumin Seed safar ku mareen badi deegaamada Beeralayda ah ee dalka, kaasi oo waxyaabaha u badan ee ay ka cabanayeen ahaa Cayayaanka khudaarta ku dhasha.